LAPHA u-Ashley du Preez omunye wabadlali abashayele iCoastal United FC amagoli amathathu ehlule ngawo iDinaledi FC kaKermit Erusmus of Dinaledi FC kwi-2022 DStv Compact Cup eMoses Mabhida Stadium Isithombe: BACKPAGEPIX
Sibusiso Mdlalose | January 22, 2022
ICOASTAL United izibekisele indawo kowamanqamu weDStv Compact Cup inenebula iDinaledi FC ngo 3-0 emdlalweni wokuqala kweyandulela owamanqamu eMoses Mabhida Stadium, eThekwini, ngoMgqibelo ntambama.
Amagoli amabili eCoastal angene ngesiwombe sokuqala, evalelwa phakathi uTerrence Mashego noTaariq Fielies, kwathi elesithathu langena ngesiwombe sesibili lishaywa uLuphumlo Sifumba ogijima eqenjini leDStv Diski Challenge leCape Town City.
IDinaledi ilahle ithuba ebelingase liyibuyisele emdlalweni ngenkathi uGaston Sirino ebanjelwa ngu-Oscarine Masuluke iphenathi.
ICoastal eqeqeshwa nguSteve Barker ibibophele abadlali abanjengoRobyn Johannes, uThabo Nodada, uMpho Makola, uMogakolodi Ngele, u-Evidence Makgopa no-Ashley Du Preez.
Kanti iDinaledi eqeqeshwa uDan Malesela, ibibophele abadlali abanjengoRushine De Reuck, uSipho Mbule, uNdabayithethwa Ndlondlo, Kermit Erasmus noGaston Sirino ogeje iphenathi.
ICoastal isizobhekana nozonqoba phakathi kweWarriors FC naMabutho, kowamanqamu alo mqhudelwano ozodlalelwa eFNB Stadium, eGoli, ngoMgqibelo ozayo.
Okuqaphelekayo wukuthi nakuba ihlukene imibono ngalo mqhudelwano njengoba kukhona abanye abalandeli abawushayela amakhala, kodwa ubukeka uqale ngesasasa.